Bangiga Barclays Banka ee dalka Uk oo sheegay inuu xidhayo 100 Account oo ay siticmaalaan xawaaldaha soomalida iyo samaynta ay ku yeelan doonto dadka soomaalida ah | Salaan Media
Bangiga Barclays Banka ee dalka Uk oo sheegay inuu xidhayo 100 Account oo ay siticmaalaan xawaaldaha soomalida iyo samaynta ay ku yeelan doonto dadka soomaalida ah
Xawaaladaha ayaa la sheegay inay nolasha dadka soomaalida ku xidhan tahay boqolkiiba 40% oo aanay jirin
Brussels(SM):-Bangiga Barclays Bank ee dalka Uk ayaa sheegay inuu xidhayo 100 Acount oo ay leeyihiin shirkadaha xawaaladaha soomaalida iyadoo ay xawaaladaha soomaalida ay muhiim u tahay dadka ku dhaqan wadamadan Yurub oo ay ugu diraan dadkooda baahan ee wadankii ku sugan .
Xawaaladaha ayaa la sheegay inay nolasha dadka soomaalida ku xidhan tahay boqolkiiba 40% oo aanay jirin habka kale oo ay ku gaarsiin karaan lacag dadkoodii , waxaana warbaxin ay ka qortay BBCda qaybeeda internetka ku sheegtay hadii aan loo fasaxin ay noqonayso in si qarsoodi ah ay lacagta u diraan .
Xawaaladaha soomaalida ayaa u isticmaala bangiga Barclays Bank in lacagaha loogu soo diro kuna kala wareegistaan lacagta, waxaana ka mid ah xawaaladaha isticmaala bangigan xawaalada Dahabshiil oo ah xawaalada ugu balaadhan ee ka jirta bariga afrika , waxaana bangigu ku wargilay inuu hal bil siinayo si ay hawlahooda usoo gabo gabeeyaan.
Xawaalada dahabshiil ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay u fulin lahayd shuruudaha banigaga uu dhiagayo si markaasi ay Accountka shirkadu usii furnaado. Maamulaha guud ee shirkada Dahabshiil Abdirashiid Duaale ayaa sheegay in go,aankan ay madaxda bangiga Barclays Bank qaateen uu usii horseedayo in si qarsoodiya lacagaha lagu maamulo siina dhiirigalinayo habka sharcidarada ee lacagta loo diro.
Barclays Bank oo ah bangiga ugu wayn ee soomalidu isticmaalaan kuna dirsadaan lacagaha ay u dirayaan qoysaskooda, dadka soomaalida ee ku dhaqan qurbaha ayaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaaafayaan 1.5 Milyon oo qof.
Laanta ururrisa xogta danbiyada aaabulan ee loo yaqaan UK Serious Organised Crime Agency ayaa sheegtay inay dhici karto inay jiraan lacago lagu keenay si khaldan oo mara xawaaladaha soomaalida.
Bangiyada aduunka ayaa sanadihii ugu danbeeyay aad u adkeeyay habka loo istcimaalo bangiyada iyadoo daba gal badan ku sameeyaan dad badan oo ay uga shiki yaan inay si aan sharciga waafaqsanayn ku keenaan lacago badan oo ay dhigtaan bangiyada kala duwan,waxaana culays badan kaga yimaadaa laamaha sirdooonka ee iyagu baadhitaan ku wada lacaga ay uga shiki san yihiin in loo adeegsado argagixiso IWM.
Dhinaca kale in ka badan 100 baadhayaal ah iyo shakhsiyaad ka shaqeeya haydaha caalamiga ah ayaa waraaq ay saxeexeen kula taliyay banigaga Barlays Bank inaanu marna xidhin acounada xawlaadaha soomalaida oo ay sheegeen in ay ku xidhan yihiin boqolaal kun oo soomaali ah oo hadii la xidho ay macaluul lasoo darsi karto wadankana u horseedi kara macluul aan xad lahayn.
Dhinaca kale hayada u dooda difaacda lacagaha la diro oo loyaqaan Dominic Thorncroft of the UK Money Transmitters Association (UKMTA) ayaa iyaduna sheegtay in dhibaato badan keeni doonto hadii la xidho xawlaadaha laga quudiyo boqolaal kun oo soomaali ah.
Hayada Oxfarm oo baadhitaan ku samaysay xawaaaldaha soomaalida ayaa sheegtay in laga yaabo in sanadkii soomaalida dalka Uk diraan lacag ka badan 100 Million £oo Pound oo u dhiganta 12% lacagta ay soomaalidu u diraan qoysaskooda waana wadanka labaad oo uu ka horeeyo Ameerika .
Hayadan Oxfarm ayaa sheegtay in dhaqaalaha soomaalida soo gala 60% ay tahay lacagta ay ehelkoodu usoo mariyaan xawaaladaha soomaalida.